Juventus oo Jannaayo raadinaysa dhowr laacib oo khad dhexe ah (Yaa ka mid ah?) – Gool FM
Juventus oo Jannaayo raadinaysa dhowr laacib oo khad dhexe ah (Yaa ka mid ah?)
Raage December 31, 2016
(Torino) 31 Dis 2016 – Jeer Axel Witsel uu u muuqdo nin u jihaysanaya China, ayay Juventus iyaduna jalleecaysaa laacibiniinta khadka dhexe ee Corentin Tolisso, Steven N’Zonzi, Luiz Gustavo iyo Roberto Gagliardini.
Kooxda Bianconeri ayaa awal u muuqatey mid heshiis la gashay Witsel oo ama jiilaalka lacag yar ku iman lahaa ama xagaaga lacag la’aan, markaasoo ah goorta uu dhacayo qandaraaskiisa Zenit.
Yeelkeede, haatan wuxuu laacibkan reer Belgium ee caalamiga ihi u muuqdaa mid lacag badan ugu wareegaya dalkaasi China oo beryahan naq degey, gaar haan midkood kooxaha Shanghai SIPG ama Tianjin Quanjin.
Dhaqaaqan ayaa Juve khasab kaga dhigaya inay dhinac kale eegaan, marka ay timaaddo cillad tirka khadkeeda dhexe oo biya day bilaabay, waxayna waloow ay horraanba soo qaateen Tomas Rincon oo Genoa ka yimi, misna sida uu qabo Sky Sport Italia, waxay sidoo kale doonayaan Tolisso oo u dheela Olympique Lyonnais iyo dhiggiisa Sevilla ee N’Zonzi.
Waxay sidoo kale ka fikirayaan laacibka Atalanta ee 22-jirka ah ee Gagliardini iyo dhiggiisa Wolfsburg ee Luiz Gustavo.
TOOS u daawo: Manchester United vs Middlesbrough - LIVE
AC Milan oo lagu haysto Gerard Deulofeu